ISAHLUKO 3: IIYUNITHI NEZINXULUMENE -Geofumed
ISAHLUKO 3: AMANQAKU NAMAKHAKATHI
Sele sithethile ukuba nge-Autocad singenza imizobo yeentlobo ezahlukeneyo, ukusuka kwizicwangciso zezakhiwo zesakhiwo sonke, ukuya kwimizobo yeenxalenye zoomatshini ezilungileyo njengaleyo yewotshi. Oku kubeka ingxaki yeeyunithi zemilinganiselo ezifuna umzobo omnye okanye omnye. Ngelixa imephu inokuba neemitha, okanye iikhilomitha ngokuxhomekeka kwimeko, njengeyunithi yokulinganisa, iqhekeza elincinci linokuba ziimilimitha, nangokweshumi leemilimitha. Emva koko, sonke siyazi ukuba kukho iintlobo ezahlukeneyo zeyunithi zemilinganiselo, ezinje ngeesentimitha kunye nee-intshi. Kwinxalenye yayo, i-intshi inokuboniswa ngefomathi yedesimali, umzekelo, 3.5 ″ nangona inokubonwa kwifomathi yecandelo, efana ne-3 ½ ”. Ngokwabo, ii-angles zinokuboniswa njenge-angles yedesimali (25.5 °), okanye kwimizuzu yemizuzwana nemizuzwana (25 ° 30 ′).
Konke oku kusinceda sicinge ezinye iindibano ezivumela ukuba sisebenze kunye neeyunithi zokulinganisa kunye neifom ezifanelekileyo kumzobo ngamnye. Kwisahluko esilandelayo siya kubona indlela yokukhetha iifom zeeyunithi zomlinganiselo kunye nokuchaneka kwazo. Cinga ngokukhawuleza ukuba ingxaki yeemilinganiselo ngokwazo kwi-Autocad iphakanyiswa.
Post edlulileyo«Ngaphambilini 2.12.1 Iinguqu ezininzi kwi-interface
Post Next 5.6 EllipsesOkulandelayo »